Maqaal::Argagax Caalamka wada ruxay:: Fadliga ilaahay iyo dadaalka mujaahidinta | Halganka Online
Maqaal::Argagax Caalamka wada ruxay:: Fadliga ilaahay iyo dadaalka mujaahidinta
Asalamu calaykum waraxmatulahi wa barakatahu
Asbuucyadi ugu danbeyeey ee sannadki tagay iyo sannadka cusub allah fadligis is badalo wawayn aya ka dhacay caalamka.
Khalkhal calami ah, ayrabooro iyo safarado la xiray, CIA da oo la dhexgalay- alqaacida wa ciwaanada guusha ee an arkayno ilaahay mahadis.
1. dhexgalida heyada sirdoonka maraykanka CIA oo taarikhda an la dhexgalin waxay ku timid dadaalka mujaahidinta alqaacida waxana laga dilay 5 ka mid ah sarakiishi ugu wanagsanyd dhinaca sirdoonka ee caalamka, waxayna qabeen sababta Afghanistan logu diray.
2. marki ugu horaysay 2 sarkaal oo muhiim u aha shirkada black water aya lagu dilay hawlgalki khost.
3. dhex galid heer sare ah oo lagu fuliyeey sirdoonka urdun iyado mid ka mid aha sarakiishi ugu xeel dherayd kana mid aha qoyska xooga ku haysta alhaalik cali binu zayd aya lagu dilay hawlgalkan barakaysnaa ee al qaacida.
4. safaradi maraykanku ku laha Switzerland aya iridaha la isugu dhuftay kadib marki laga baqay hawlgalo barakaysan.
5. waxaa iridaha la isugu dhuftay ayraboorka kalifoorniya cabsi laga qabo mujaahidinta alqaacida.
6. ka gudbid dhamaan dhibatooyinki sirdoon iyo amni ee cadowga iyo isku dayid qarxin diyaradi Detroit taas oo ka dhigtay marki ugu horaysay taarikhda in hogamiyasha saliibiyinta caalamka obama iyo kuwo kale qirtaan inay ku fashilmeen ka hortagida weerarada alqaacida, weerarka in kasta oo uusan dhicin lakiin guul weyn aya ka so hoyatay.
7. safaradaha wadamada maraykanka, japan, spain, ingiriska ay ku leeyihin Sanca aya iridaha la isugu laabay cabsi awgeed.
8. cia oo meel fagare ah ka qiratay in alqaacida aan loo daciifin sidi ay filayeen.
9. saldhiga khost ay cia da ku lahayd waa meeshi laga soo maamuli jiray diyaradaha an cidna wadin ee Afghanistan iyo Pakistan ku layeey mujaahidinta iyo muslminta rayidka ah.
10. muslim aya isku dayeey inu kharajiyo ninki cayeey rasuulka SCW digniin culusna gaarsiyeey.
11. 3 jornaal oo ka soo baxa denmark oo ogoladay inaysan dib danbe u dabacin kartoonada balse waxay is ilowsinayaan in ciqabtooda so dhowdahay.
12. hawlgalki ugu weyna muddo 27 sanno gudahood ah ayeey mujaahidinta al qaacida ku fuliyeen cia da.
13. marki ugu horaysay taarikhda hogamiyal hore oo ka tirsana ciidamada maraykanka iyo kuwo hada shaqada haya oo dhaleecayn dusha uga turay Ciada.
14. marki ugu horaysay, cadowga wuxuu gartay in aysan ficnayn ciidamo la keeno koonfurta jazeeratul carab, yemen balse waxay si hoose uga baryayaan madaxdooda maraykanka tageero iyo hiil.
15. fikirka jihaadiga ah aya si weyn ugu faafay ilaahay fadligis meelo badan oo ay ka mid yihin indunusiya, yemen, Pakistan, murutaniya, mali, Afghanistan,kuwayt, falastiin, iraq,masar,America,aljeeriya, moroko, nayjer, jazeeratul carab,soomaliya iyo meelo kale oo badan.
16. alqaacida aya si toos ah u sheegatay hawlgalki khost, mujaahidinta alshababul almujaahidina waxay musliminta ugu baaqen inay u argudaan rasuulkena suuban SCW.
Waxan oran kara arintan waa wax ilaahay islaamka ku manaystay iyo ifafaalaha nasriga soo muuqda, iyo dadaalka mujaahidinta islaamka, alqaacida waxay gaalo ku argagax galisay jihad saafi ah iyo geesinimo saraysa.
Nasriga ilaahay wa imaanaya cadowga saliibiga ah iyo cidkasta oo la shaqaysana way jabayaan allah idankis
Maqaalkan waxa qoray walaal allaha ka abaalmariye
« Xog Muhim ah:Indha Cadde oo noqday masuulka DKMG ah ee ugu dhaw Sirdoonka Mareykanka ee Villa Somaliya ka howlgala. Tuulada Warxoolo oo degan iyo Meydadkii Suufiyada oo kuwa la duugay kuwa kalena howdka laga raadinayo( Daawo Sawirada). »